यी हुन् २०२० का उत्कृष्ट ल्यापटप (मूल्य र फिचर सहित):: Naya Nepal
यी हुन् २०२० का उत्कृष्ट ल्यापटप (मूल्य र फिचर सहित)
काठमाडौं । बजारमा अहिले विभिन्न ब्राण्ड, मूल्य र फिचर सहितका ल्यापटप उपलब्ध छन् । यति धेरै ल्यापटपमा उत्कृष्ट ल्यापटप चयन गरेर खरिद गर्नु जोकसैका लागि अप्ठ्यारो छ ।एउटा राम्रो ल्यापटपले पावर, इफिसियन्सी, पोर्टेबिलिटी र कम्फर्टलाई सन्तुलित राख्न सक्छ । त्यस्ता ल्यापटपमा राम्रो कीबोर्ड र ट्र्याकप्याड हुन्छ । यिनै कारण तपाईं स्मार्टफोनको सट्टा ल्यापटप नै चयन गर्नुहुन्छ ।यसको ब्राइटेनस, सार्पनेस र डिस्प्ले सबै आखाँमैत्री हुनुपर्दछ । भिडियो इडिटिङ तथा एड्भान्स गेमिङका लागि पनि यो पर्याप्त शक्तिशाली हुनुपर्दछ । ब्याट्री पनि टिकाउ हुनुपर्दछ । यसैले आज हामी तपाईंलाई २०२० का उत्कृष्ट ल्यापटपहरुका बारेमा बताउँदै छौं ।
१. डेल एक्सपीएस १३ (२०२०)
यदि तपाईं अलराउण्डर उत्कृष्ट ल्यापटप खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने डेलको नयाँ एक्सपीएस १३ एकदमै उपयुक्त हुनेछ । यसमा टेन्थ जेनेरेसनको इन्टेल प्रोसेसर र शक्तिशाली ग्राफिक्स र बेजल फ्री १६:१० प्यानल रहेको छ ।
यसमा १९२० गुणा १२०० पिक्सल अर्थात् फोरके डिस्प्ले रहेको छ । ग्राफिक्स डिजाइनिङ सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्नेहरुका लागि यसको डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ ।यसले उज्यालो कोठा वा बाहिर स्क्रिन देखिने गरी ५०० निट्सको ब्राइटनेस दिन्छ । यसको ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो रहेको छ ।यसको बेस मोडलमा कोर आई फाइभ १०३५ जी १, ८ जीबी र्‍याम र २५६ जीबीको इन्टर्नल स्टोरेज रहेको छ । यदि तपाईं इन्टरनेट ब्राउज मात्र गर्नुहुन्छ भने यो तपाईंको लागि उपयुक्त छ ।तर यदि गेम खेल्न वा कुनै पनि क्रिएटिभ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको स्टोरेज र र्‍यामलाई अपग्रेड गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य औसतमा एक हजार डलर रहेको छ ।
२. एचपी इन्भी एक्स ३६० (२०२०)
अब प्रिमियम लुक्स भएको ल्यापटप खरिद गर्न तपाईंले हजार डलर रुपैयाँ खर्च गरिरहन पर्दैन । एचपीको इन्भी एक्स ३६० ल्यापटप एउटा उत्कृष्ट बजेट सेग्मेन्टको ल्यापटप हो । यसको डिजाइन एकदमै कम्प्याक्ट, बलियो र सुन्दर छ भने पर्फमेन्स पनि राम्रो छ ।
बेजल लेस डिस्प्ले रहेको यस ल्यापटपमा टचस्क्रिन रहेको छ । ब्राइटेनसका लागि तपाईंले तीन सय, चार सय र हजार निट्सको प्यानल रोज्न सक्नुहुन्छ ।कीबोर्डमा एकदमै सजिलो हट की थप गरिएको छ भने यसको माइक्राेफोन र वेबक्याममा किल स्विचहरु पनि छन् । यसको रोचक फिचर भनेको यसमा एएमडीको राइजन ४००० सिरिज रहेको छ ।यसले राम्रोसँग ह्याभ्भी लोड मल्टिटास्किङ सम्पन्न गर्दछ भने यसको इन्टिग्रेटेड रेइडोन ग्राफिक्समा एकदमै राम्रो गेमिङ पर्फमेन्स पाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य औसतमा ७३९ डलर रहेकाे छ ।
३. म्याकबुक एयर (२०२०)
एप्पलका डिभाइसहरु मन पराउनेका लागि म्याकबुक एयर एकदमै राम्रो अप्सन हो । यसमा टेन्थ जेनेरेसनको इन्टेल प्रोसेसर रहेको छ, तर याे डेलको एक्सपीएस १३ को भन्दा कम पावर भेरिएसनमा उपलब्ध छ ।
यसमा सार्प रेटिना डिस्प्ले र नयाँ सिजर स्विच कीबोर्ड रहेको छ । यसको बेस मोडलमा कोर आइथ्री, ८ जीबी र्‍याम र २५६ जीबी इन्टर्नल स्टोरेज रहेको छ ।यो हजार डलरमै बजारमा पाउन सकिन्छ, तर तपाईंले थोरै पैसा थप गरेर कोर आई फाइभमा अपग्रेड भएको प्रोसेसर सहितको ल्यापटप लिन सक्नुहुन्छ । २०२० को म्याकबुक एयरमा १६ इन्च म्याकबुक प्रोको जस्तै नयाँ र सुधारिएको कीबोर्ड छ । यसमा विवादित फिचर टचबार पनि राखिएको छैन ।यसमा भएको स्ट्याण्डर्ड टप रो र फङसन की एकदमै आकर्षक फिचर हो । सजिलो लगईन तथा पेमेन्ट अथेन्टिकेसनका लागि यसमा टच आइडी फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर रहेको छ । यसको डिजाइन, डिस्प्ले, पर्फमेन्स सबै कुरा राम्रो छ ।
४. आसुस रग जेफाइरस जी १४
आसुसको रग जेफाइरस जी १४ थोरै मूल्यमा पाइने एकदमै राम्रो र शक्तिशाली गेमिङ ल्यापटप हो । यसमा एएमडीको नयाँ राइजेन ९४९०० एचएस र एनभिदियाको आरटीएक्स २०६० म्याक्स क्यू जीपीयू छ भने १२० हर्जको डिस्प्ले रहेको छ ।
यसले अहिलेका सर्वाधिक डिमाण्डमा रहेका गेमलाई कुनै पनि समस्याबिना उच्चस्तरको सेटिङमा रन गर्न सक्दछ । यसको तौल पनि एकदमै कम साढे तीन पाउण्डमात्र छ । ब्याट्री लाइफ आकर्षक छ, जसले गेमिङ र मल्टिटास्किङलाई ९ घण्टासम्म थेग्न सक्दछ । गेमबाहेक बिजनेस तथा दैनिक मल्टिटास्किङका लागि यो एकदमै राम्रो नोटबुक हो । तर यसमा वेबक्याम भने राखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य औसतमा १,४५० डलर रहेको छ ।
५. म्याकबुक प्रो (१६ इन्च, २०१९)
पावर युजर्सका लागि एप्पलको १६ इन्चको म्याकबुक प्रो सबैभन्दा राम्रो ल्यापटप हाे । यसमा कीबोर्ड आकर्षक छ ।
म्याकबुक प्रोमा साउण्ड एकदमै राम्रो छ, यसमा तीनतिर तीनवटा स्पिकर छन्, जसमा दुईवटा उफरहरु पनि छन् । यसमा भएको अडीबल ब्यास र स्टेरियो सेप्रेसनले गर्दा सन्तुलित अडियो सुन्न सकिन्छ । भिडियो इडिटिङ, धेरैवटा अडियो ट्रयाक र धेरै फोटोहरुलाई प्रोसेस गर्नुपर्ने काम छ भने १६ इन्चको म्याकबुक प्रो एकदमै राम्रो अप्सन हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य औसतमा २,३९९ डलर रहेको छ ।
६. एचपी इलाइट ड्रागन फ्लाई
एचपी इलाइट ड्रागन फ्लाई सोलिड सेक्युरिटी भएको बिजनेस ल्यापटप हो । व्यवसायिक व्यक्तिहरुका लागि यो एकदमै राम्रो डिभाइस हो ।
यसको २०२० को मोडलमा एचपीको सुपर सेक्योर स्योर भ्यू रिफ्ल्याक्ट टेक्नोलोजी प्रयोग भएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा काम गरिरहँदा यसको स्क्रिनलाई बङ्गाएर लुकाउन सकिन्छ ।स्क्रिनलाई नबङग्याउँदा यसले सात सय निट्स ब्राइटनेस दिन्छ, जसमा एकदमै राम्रो भ्युविङ एंगल पाउन सकिन्छ । ब्युल्ट इन टाइल ट्रयाकर भएको यो पहिलो ल्यापटप हो । यसको मतलब यदि तपाईंले आफ्नो डिभाइस हराउनुभयो भने टाइल स्मार्टफोन एप प्रयोग गरेर अलार्म सेट अफ गर्न सक्नुहुन्छ (ब्लुटूथ रेन्ज भएको अवस्थामा) ।तपाईंले टाइलको क्राउड फाइन्डिङ नेटवर्कबाट विश्वभरी जुनै कुनामा पनि आफ्नो डिभाइसलाई लोकेट गर्न सक्नुहुन्छ । यसमा ११ घण्टासम्म काम गर्ने अभूतपूर्ण ब्याट्री क्षमता छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य औसतमा १९६२ डलर रहेकाे छ ।
७. लेनोभो क्रोमबूक डोयट
लेनोभो क्रोमबुक डोयट बालबालिकाहरुका लागि एकदमै राम्रो ल्यापटप हो । १० इन्चको यो ल्यापटप एकदमै राम्रो छ । यसमा डिट्याचेबल कीबोर्ड र किकस्ट्याण्ड रहेको छ ।
२.०३ पाउण्ड तौल भएको यो ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ ११ घण्टाको छ । यसमा भएको मेडिया टेक प्रोसेसरले ल्यापटपमा पर्ने कामको भारलाई थेग्न सक्छ ।बालबालिकाका लागि उपयुक्त यस ल्यापटपमा थोरै ट्याबहरुलाई ब्राउज गर्न, नेटफ्लिक्स हेर्न, एन्ड्रोइड गेम खेल्न र फोटो इडिट गर्न एकदमै सजिलो छ । क्रोम ओएसका लागि यसमा ट्याव्लेट मोड पनि छ, जसले एन्ड्रोइडबाट प्रेरित जेस्चर नेभिगेसन सिस्टम र पृथक क्रोम लेआउटलाई पनि सपोर्ट गर्दछ । कम बजेट हुने हरुका लागि क्रोमबुक डोयट एकदमै राम्रो छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य औसतमा २९९ डलर रहेको छ ।
८. एचपी स्पेक्ट्री एक्स ३६० १३ (लेट २०१९)
एचपी स्पेक्ट्री एक्स ३६० एउटा प्रिमियम लेभलको टु इन वान विण्डो ल्यापटप हो । यसमा इन्टेलको नयाँ प्रोसेसर, भाइब्रेट टचस्क्रिन र धेरैवटा पोर्ट अप्सनहरु रहेका छन्, जुन यस सेग्मेन्टको ल्यापटपमा खासै पाउन सकिन्न ।
यो ल्यापटपको तौल तीन पाउण्डभन्दा कम रहेको छ । यात्रा गर्नेहरुका लागि पनि यो ल्यापटप एकदमै राम्रो छ । यसको नयाँ मोडलमा पुरानोको भन्दा सानो फुटप्रिन्ट छ । यसमा फेसियल र फिङ्गरप्रिन्ट दुवै बायोमेट्रिक अथेन्टिकेसन छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य औसतमा १२५० डलर रहेको छ ।
९. म्याकबुक प्रो १३ (२०२०)
यदि तपाईं एयरभन्दा शक्तिशाली तर, १६ इन्चको म्याकबुक प्रोभन्दा सस्तो ल्यापटप चाहनुहुन्छ भने म्याकबुक प्रो १३ उत्कृष्ट अप्सन हो । यसले पाँच सय निट्सको स्क्रिन ब्राइटनेस, उत्कृष्ट स्पिकर र राम्रो कीबोर्ड प्रदान गर्दछ ।
यसमा दुईवटा मोडल उपलब्ध छन् । तपाईंले आफ्नो आवश्कता अनुसार चयन गर्न सक्नुहुन्छ । जसमा बेस मोडलमा आठौं जेनेरेसनको इन्टेल प्रोसेसर र टु थण्डरबोल्ट थ्री प्रोसेसर रहेका छन् ।योभन्दा महंगो अर्को भर्सनमा टेन्थ जेनेरेसनको प्रोसेसर र फोर थण्डरबोल्ट थ्री पोर्ट रहेका छन् । यदि तपाईसँग बजेट छ भने अधिक मूल्यको भर्सन तपाईको लागि उपयुक्त हुनेछ । यी दुई जेनेरेसनबीचको पर्फमेन्स पनि एकदमै फरक छ । फोर थण्डरबोल्ट तीनवटा पोर्ट भएको मोडलको मूल्य औसतमा १ हजार सात सय ९९ डलर रहेको छ ।
१०. एसर क्रोमबुक स्पिन ७१३
कलेज वा विद्यालय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई सस्तो र हलुको ल्यापटप आवश्यक छ भने एसर क्रोमबुक स्पिन ७१३ एकदमै राम्रो अप्सन हो । यो सस्तो मोडल भने होइन तर यसले न्युन मूल्यमा नै टप नोच पर्फमेन्स प्रदान गर्दछ ।
यसमा कोर आइ थ्री, फाइभ, सेभेन सबै मोडल उपलब्ध छन् । यसले कुनै पनि ल्याग, आवाज र तापक्रम बिना भारी कामलाई सरल र सुमधुर तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्दछ । यसको ब्याट्रीले तपाईलाई दिनभरी सपोर्ट गर्न सक्छ भने कीबोर्ड पनि एकदमै राम्रो छ । यसको विशेष फिचर भनेको यसमा रहेको डिस्प्ले पनि हो । यसको सार्प प्यानलले उच्चस्तरको पिकर प्रदान गर्दछ । यसको स्क्रिन वास्तवमा म्याकबुक प्रोको स्क्रिन भन्दा पनि राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य औसतमा ६२९ डलर छ ।
डिशहोमको फाइबर नेट नया ठाउँ- जडिबुटी, पेप्सीकोला, काडाघारी र बागडोल थपेको छ ।
यी हुन् नेपालका उत्कृष्ट १० ईकमर्स कम्पनी
आज राति यो समयमा मृगशिरा उल्कावर्षा हुने
विद्यार्थीलाइ दिएको ह्याप्पी लर्निङ प्याक अब सबै ग्राहकलाई उपलब्ध, यसरी लिनुहोस्
नेपालमा बनेको मेडिकल ड्रोनले जित्यो अन्तराष्ट्रिय अवार्ड, कसरी गर्छ काम ?
नेपालमै बन्यो मास्क र सेनिटाइजर दिने रोबोट
प्रेमीले उडाए संजय दत्तकी श्रीमती, महिमा चौधरीले गरिन् अचानक विवाह !